डाक्टर गोविन्द केसीका समर्थकमाथि ओली सरकारको दमन, माइतीघरबाट १७ जना पक्राउ — Sanchar Kendra
डाक्टर गोविन्द केसीका समर्थकमाथि ओली सरकारको दमन, माइतीघरबाट १७ जना पक्राउ
काठमाडाैं । माइतीघर मण्डलाबाट १७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको समर्थनमा आन्दोलन गर्ने क्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। माइतीघर मण्डलाको निषेधित क्षेत्र तोड्न र यातायात अवरुद्ध पार्न खोजेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।
पक्राउ पर्नेमा अभियन्ता पुकारबमसहित छन्। १७ मध्ये १५ पुरुष र एक महिला रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई साँझ ५ बजे छोडिने परिसर प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्रसिंह राठौरले बताए।
वरिष्ठ चिकित्सक केसी १२ दिनदेखि सत्याग्रहमा छन्। तर, सरकारले उनीसँग वार्ता गर्नका लागि कुनै पहल गरेको छैन। स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुँदै गइरहे पनि केसीसँग संवाद नगरेको भन्दै यसअघि मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। केसीको अनसन लम्बिँदै जाँदा उनको समर्थनमा प्रदर्शन पनि तीव्र भइरहेको छ।
यसपटक ६ बुँदे माग राख्दै केसीले जुम्ला जिल्लामा अनसन थालेका थिए। उनलाई केही दिनअघि काठमाडौं ल्याइएको थियो। उनी अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा अनसनरत् छन्। आमरण अनसनमा रहेका डा. गोविन्द केसीले आफ्नो माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।
अनसनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट शुक्रबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेका छन्, ‘यो साधारण माग छ, पूरा गरिदिनुस् । ’प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान बनाउने सहमति भएर चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा आएपछि कार्यान्वयन नभएको डा. केसीले बताए । ‘कर्णाली प्रतिष्ठन खुलेको ८ वर्ष भइसक्यो, एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन’ उनले भने, प्रदेश २ र ४ मा पनि निर्माण सुरु हुनुपर्ने हो ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका थुप्रै फाइल रोकेको भन्दै उनले आयुक्तहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए । आफ्ना अरु माग पनि साधारण रहेको भन्दै उनले सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । माग सम्बोधन नगर्ने हो भने आफ्नो सत्याग्रह जारी रहने डा. केसीले बताएका छन् ।
सरकारले सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्लंघन गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला पाँचौं पटक सत्याग्रह बसेका उनले भने, ‘तपाईंको कार्यकालमा उपलब्धि भएको छैन, बरु भएको गुम्ने अवस्था छ । हामी अनसन बसेकै बेलामा (चिकित्सा शिक्षा) ऐन ल्याउँदा पनि जनतामुखी बुँदा हटाएर माफियामुखी बुँदा ल्याउने काम भयो ।’